Holy Innocents' Catholic Church - Catholic Archdiocese of Yangon
Fr. Benedict Kyaw Kyaw Naing (Pastor).
1/D, Conner of Pinlone Road and Yaukkaw Pagoda Road 26th Block, South Dagon Myothit YANGON Tel: +95 (0)9 493 33615.
Daily Masses: 6:15 a.m. ( Eng.).
Sunday Masses: 6:15 a.m. (Myan.), 8:15 a.m. (Myan.), 4:00 p.m. (Myan)
The Capital Yangon is expanding new satellite towns that have emerged around Yangon since 1989. People are moving to these new towns – Dagon Myothit, Shwe Pyi Thar, and Hlaing Tha Yar – in the outskirt of Yangon.
Seeing the spiritual needs of the Catholics moving to Dagon Myothit,achurch, dedicated to the Holy Innocents, was built in South Dagon Myothit town. Eventually it was officially established as new parish in January 2001 and the first parish priest was Fr. James Tin Maung Htwe. The present church was dedicated on 28 December 2003.
In 2004, there were about 1890 Catholics in this parish. Now there are 1 priest and2Religious Sisters (SFX) working in this parish.
ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးသည်တဖြေးဖြေး လူဦးရေတိုးတက် များပြားလာပါသည်နှင့်အမျှ မြို့သစ်များ ပေါ်ထွက်လာနေပေသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍၊ ဒဂုန်မြို့သစ်၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ ဟူ၍မြို့ကြီးများ ပေါ်ထွက်လာပေသည်။ ထိုသို့အတွက်ကြောင့် ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာမြို့သစ်များ၌လည်း ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များ တိုးတက်ရောက်ရှိလာကြလေသည်။ ယနေ့ထိ ထိုနေရာများ၌ ၀တ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းများအတွက် ဘုရားကျောင်းနှင့် မြေပိုင်မရှိသေးပေ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်စာရင်းများအရ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဦးရေ ၈၀၀ ခန့်ရှိလေသည်။
1.	Fr. Edward San Thein
2.	Fr. Philip Myaing Than
3.	Fr. Savarimuthu Nyan Myint
4.	Fr. Solomon Hla Aung
5.	Fr. Noel Saw Naw Aye
6.	Fr. Martin Zaw Zaw Naing	2 May 2009-	Present parish priest